July Dream: Buck in musth
တိရစ္ဆာန်ကို အငြိမ်ရိုက်ဖို့ ခက်တယ်..
shutter speed ဘယ်လောက်လဲ?
တစ်ကောင်ထဲပဲ.. ဒါပေမယ့် ဆိတ်သိုး....။
ကျေးဇူးတင်လွှာက ခုန မတွေ့သလိုပဲ...။
တို့လည်း ဘုတ်အုပ်ကြီး ကြည့်ပြောတာပါ..ငှဲငှဲ
ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေး မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ ရှဲ့ရှဲ့နီပါ။
တော်ကြာ မသိတဲ့သူတွေက ဂျူလိုင်တစ်ယောက် အီးကောင်း လှချည်လားလို့ အထင်တွေ ကြီးနေမှာကို စိုးမိတယ်လေ။
ဘလော့လောကထဲမတော့ ဆိတ်သိုးလိုတောင် အသုံးမ၀င်တဲ့ တိရိစ္တာန် တကောင်ဝင်နေတယ်။ အရောမ၀င်မိဖို့လိုတယ်။
Fighting Ball ဆို စာဖတ်သူနဲ့ ပိုရင်းနှီးမလားလို့ဗျ။
ထင်တာကတော့စိတ်ဝေဒနာပေါ့။ မပြည့်စုံခြင်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်နေရပြီး မပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝ။ အဲဒါကို ဖုံ့းကွယ်နေရင်းနဲ့ ဘဝကို ဟန်ဆောင်ကာနေ။ ပျော်ရွင်သလိုနဲ့။ စိတ် ရဲ့ ခံစားချက် ကို အပြည့်အဝမရတဲ့ အချိန်မှာ မြင်တဲ့ အရာအားလုံးက တိုက်ခိုက်ဘို့ဘဲဖြစ်မယ်။ အမှန်တော့သနားစရာကောင်းပါတယ်။
(တို့ကတော့ဆိတ်သိုးကြီးကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အဲဒီဟိုဟာထက်စာရင်။)
Fighting Ballနဲ့ ချစ်တီးထမင်းတောင် စားချင်လာပြီ..:P
တကယ် စိတ်ဝေဒနာဆိုရင် ပစ်ထားလိုက်ဖို့ မသင့်ဘူး။
စကတည်းက မသိရင်တဲ့သူဆိုရင်လည်း ကောင်းသားပေါ့။
အပူတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့ ဆိတ်သိုးကြီးလည်း ခုလောက်ဆို အမွှေးအမျှင်တောင် မရှိလောက်အောင်ပြောင်နေလောက်ပြီ ။ ဇာတ်လမ်းတွေကိုမအိပ်မနေ စဉ်းစားနေရတာ ကြာလာရင် သွပ်သွပ်ခါတဲ့ဘ၀ကိုရောက်တော့မယ် ဆိတ်သိုးရေ......
ပစ်ထားလိုက်ဖို့၊ တိုက်ခိုက်ဖို့၊ ဝင်မရောဖို့ ကိုယ်တော့ အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မဆီလျော်ဘူးပဲ မြင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ တိရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘဲ လူဖြစ်နေလို့ပါ။
နောက်တစ်ခုက သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်လဲ အရေးပါတဲ့လူ ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင်ပါ။
လောကမှာ ဘယ်သူရှိမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာမျိုးတော့ မရှိဘူးပေါ့။ သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့လူတွေမှာ၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူမရှိလဲ ဖြစ်မှာပဲပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တာက လူပိုသက်သက် မဟုတ်တဲ့လူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တနည်းအားဖြင့် အသုံးကျနေတဲ့လူ၊ အဲဒီလိုလူမျိုးကို ကိုယ့်ကြောင့် ပိုပြီး ဆိုးဝါးသွားစေတာမျိုးကို မဖြစ်စေချင်တာ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်က ခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘဲ ဒီလိုပြောတာ နည်းလမ်းမကျဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ လူ့ဘောင်ထဲမှာ မရှိသင့်တဲ့ လူတွေဟာ သာကူးတွေပဲဗျ
ဆိတ်သိုးကြီးအကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ်နော့်။ သာကူး ဟုတ်ပါ့ ခေါ်ဝေါ်ပုံလေးကိုပါ မှတ်သွားတယ်။
မင်းမို့လို့ ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးတတ်လေခြင်း ..း)
ဖေးဖေးမမ ဆက်ဆံတဲ့နည်းကလည်း အရာမထင်ပါဘူး..
ဘုန်းကြီးတစ္ဆေကို ကမ္မဝါရွတ်ပြသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့.။
အကျိုးနည်းတာပဲ။ အားအားယားယား ဘာတွေလျှောက်လေ့လာနေသတုံး
အပျိုနဲ့ အအိုအမြင်မတော်မှတော့ ဘာကျန်သေးလို့လဲ မပျို့တပျိုတို့ မအို့တအိုတို့များ ရှိသေးလားဟမ် .. (မှတ်ချက် ဖတ်တော့ ဆိတ်လစေ့ ဟု အသံထွက်ပါသည်) ဟီဟိ - ကျေးဇူးတင်မလားလို့ ဝင်ပွားကြည့်တာ။
တချို့ comment တွေက post နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲနော်..
မတူး...စေ့မဟုတ်ပါ။ စိပါ :D
ကျနော်လည်း ဆိတ်ဝှေးစေ့ လုပ်ရင်ကောင်မလားဟင်။ နာမည်နောက်မှာ အမြီးရှည်တာပေါ့။ ဗီလိန်ဆိုတာလည်း လူအမြင်ကပ် သတ္တဝါပဲ။ ဆိတ်ဝှေးစေ့လည်း လူအမြင်ကပ် သတ္တဝါပဲ။ ညီအစ်ကိုတွေ ထင်တယ်။ :P
တောက်.... ဆိတ်သိုးသာ ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိဗျာ... ဟိ...။
ဟုတ်တယ်လေ နတ်ပြည်အထိတောင် သွားစရာမလိုတော့ဘူး.. ဒီမှာတင် ပွဲသိမ်းပဲ.. အဟေဟေ...။
ဒါပေမဲ့နော် စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဆိတ်လစေ့မဟုတ်ဘူး ကျားဆိုကိုက် တုန်းဆိုတိုက်ရဲတဲ့ ကောင်ပါ.
ဆိတ်လစိ ဆို ပိုမှန်တယ်
ကိုရင်ဂျူလိုင် ကလဲ မိန်းမလိုမိန်းမရလို့ မသုံးနဲ့လေကွာ
မိန်းမတွေထဲမှာ မြင့်မြတ်တဲ့မိန်းမတွေရှိတယ် အခြောက်ဆိုလည်း
အခြောက်အလျောက် ထူးချွန်တဲ့ အခြောက်တွေရှိတယ်
ယောက်ျားဆိုလည်း ယောက်ျားအလျောက် ထက်မြက်တဲ့ ယောက်ျားတွေရှိတယ်
ပြောသင့်တာက လူဖြစ်ပီး ဆိတ်လစိ တပ်ထားတဲ့သူ မုန်ယိုတော့ လူစိတ်ပျောက် မျောက်စိတ်ပေါက် အဲ့လိုဖြစ်သင့်တယ် :)